Date My Pet » Top Tips ho Kiss Lehibe izay Mahatsiaro Just Perfect
Last nohavaozina: Oct. 23 2020 | 2 min namaky
Nanoroka no tena manan-danja iray ao anatin'ny tantaram-pitiavana misy fifandraisana. Koa satria ny fahiny fifandraisana maro manam-pahaizana no niresaka momba ny maha zava-dehibe ny MIFANOROKA ary ankehitriny ny hitany avy amin'ny fikarohana efa nanandrana izany ny matetika ny MIFANOROKA dia mifandraika mivantana amin'ny fari-fahafaham-po voalaza tao amin'ny fifandraisana.
Nandritra ny fikarohana izany hoe hita fa 66% ny vehivavy sy ny 59% ny olona namarana ny fifandraisana satria ny vadiny tsy mahay MIFANOROKA. Izany dia mampiseho ny fomba iray mafy mila mianatra ny fahaiza-nanoroka mba hahatonga ny / ny fifandraisany lava iray maharitra. Ireto ambany ireto ny sasany toro-hevitra mahasoa ho an'ny lehibe oroka.
– Miezaha tsy nanoroka-bahoaka. Eny, azo antoka fa afaka mandeha ianao fa ny velona pecks ampahibemaso, fa izany foana ny tsy hendry loatra mpankafy avy teny an-kalamanjana. Oroka liana tokony hampahamendrika ny fotoana manokana sy ny toy izany fa tsara kokoa raha toa ka hiditra amin'izany-tsokosoko, na raha ao ny tsy misy mahita anao. Nanoroka amin'ny tsy miankina mamela roa mihitsy mba ho amin'ny tsara indrindra ny mpankafy, izay no tena lehibe ingredient ny oroka.
– Pitiavana ny olona nandray anjara tamin'ny fifandraisana Matetika no sarotra ny hahatakatra ny zavatra tokony hataony ireo marina ny nify rehefa nanoroka. Raha toa ka tsy afaka mitantana ny nify rehefa nanoroka, ianao antoka ratsy kisser. Ny olana toa Tsotra ihany, fa raha ny marina dia tena sarotra ny handresy azy io.
– Mba hahazoana antoka fa ny nify tsy manimba ny amin'izy ireo, na hijanona tsy ho entanim-pitiavana tsara rehefa nanoroka, dia tsy maintsy ho araka izay malemy fanahy araka izay azo atao, rehefa fanetsiketsehana ny molotry ny mpiara-miasa eo nify. Avy eo dia, misintona tsikelikely izy ireo (ny molotry ny namanao) nihemotra ary avelao izy ireo solafaka ny hampandeha tsara ny nify amin'ny alalan'ny. Ny asa Tsy hoe sarotra loatra, inona no sarotra mitoetra mailo tsy mamela ny namanao mba hahatakatra fa ianao mahalala ny toerana ny nify.
– Kissers lehibe kokoa foana ny hanao masony ny namany rehefa nanoroka. Eny, misy fotoana kissers hanakimpy ny masony mba hahatsapa ny fotoana, fa raha tsy mitranga izany oroka tonga lafatra. Mba ho tonga lafatra ilay oroka, tsy tokony hanirina ny masonao raha vao tonga ny molotrao amin'ny fifandraisana amin'ny an'ny namanao ny. Tsara eo amin'ny masony; aoka ny filan'ny nofo mikoriana avy amin'ny maso ny mpiara-miasa ny; izany no fomba fahandro ho tonga lafatra oroka.
– Kisser lehibe tsy mamela ny zavatra niainan'ny nanoroka ny Hankaleo noho ny / ny mpiara-miasa. Izany, raha te-ho tsara kisser tsy maintsy mahita fomba mba hahazoana antoka fa ny asa MIFANOROKA mankaleo aza noho ny mpiara-miasa. Iray fomba mampientam-po kokoa ny fanaovana nanoroka dia amin'ny alalan'ny anjara ny vatana iray manontolo ho eo an-fihetsika. Hanafosafo ny faritra erogenous indrindra ny namanao ny vatana mampiasa ny tanany sy moramora fanorana ny / lohany, tarehy sy ny tendany. Azo antoka fa ny mpiara-miasa manomboka mankafy ny fotoana bebe kokoa.
Mba hahatonga ny oroka, oroka lehibe, tsy maintsy manao zavatra izay mamerina ny namany amin'ny. Tsy ny asa sarotra rehetra; mila fotsiny ny fikasana tsara sy betsaka ny filan'ny nofo